Latest News on pakistan vs zimbabwe - ANI News - Asia’s Premier News Agency
Mon, Nov 29, 2021 |Updated 20:58 IST
Search For "pakistan vs zimbabwe"
Babar Azam becomes first Pakistan captain to win his opening four
Harare [Zimbabwe], May 10 (ANI): Pakistan Cricket Board (PCB) on Monday congratulated the Pakistan men’s cricket team on their sixth consecutive series win and Babar Azam, who has become the first Pakistan captain to win his opening four Tests.
Pak vs Zim: Want to give our bowlers enough to attack, says Fawad
Harare [Zimbabwe], May 1 (ANI): Pakistani batsman Fawad Alam, who scored a century on Day Two of the ongoing first Test against Zimbabwe, has blamed the slowness of the pitch for the slow batting approach adopted by his team's batsmen.
Babar Azam breaks Kohli's record, becomes fastest to score 2k runs
Harare [Zimbabwe], April 25 (ANI): Pakistan skipper Babar Azam on Sunday added another feather to his highly illustrious cap as he became the fastest batsman to reach 2,000 runs in T20I format.
Painful performance, we played poor cricket: Babar after Pak's los
Harare [Zimbabwe], April 24 (ANI): Pakistan skipper Babar Azam has lamented his side's performance in the second T20I of the three-match series against Zimbabwe, saying that the Green Shirts played poor cricket and it was a painful performance.
Pakistan vs Zimbabwe: Zahid Mahmood replaces injured Shadab Khan i
Naseem Shah among six additional players called for Pakistan Test
Lahore [Pakistan], April 3 (ANI): Pakistan Cricket Board (PCB) selectors, as part of their strategy to keep all the leading performers involved in the system, on Saturday invited six additional players to participate in the training camp for the Test players ahead of the Zimbabwe series.
Pakistan to become first international side to tour Zimbabwe in po
Lahore [Pakistan], March 28 (ANI): Pakistan will become the first men's international cricket side to play in Zimbabwe in the post-Covid-19 era when they announced the schedule of their two-Test and three T20I series.
3rd ODI: Babar Azam's ton in vain as Zimbabwe defeat Pakistan in S
Rawalpindi [Pakistan], November 3 (ANI): Babar Azam's 125-run innings went in vain as Zimbabwe defeated Pakistan in a Super Over in the third and final ODI here at the Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday.